Gịnị Mere Ndị Mmadụ Ji Jụ Iso ?dị Gị? | Martech Zone
Saturday, March 21, 2015 Fraịde, Machị 20, 2015 Douglas Karr
Otu n'ime ihe omuma ihe omuma anyi anyi mere ka anyi biputa bu Kedu ihe kpatara ndị mmadụ ji edoro gị na Twitter. Ndi ndi mmadu nwetara onu ogugu site na ya ma olile anya na o mere ha ka ha chegharia usoro mgbasa ozi mgbasa ozi ha n'oge a.
Aga m ekwupụta ihe ebe a nke nwere ike iju ụfọdụ ndị folks anya:
Achọghị m ịma ma ndị mmadụ mebie m ma ọ bụ wepu aha na email m.
Enwere m ike ịnụ mkpu oke iwe na ujo ugbu a… achọghị m ịma maka ndị ahụ. Enwere m ọrịa na ike gwụrụ ndị ahịa na-achụ eyeballs kama nsonaazụ. Imirikiti ndị Fans, ndị na-eso ụzọ na ndị debanyere aha ha abaghị uru maka azụmahịa gị. Nke a apụtaghị na ị gaghị eche banyere ndị na-ege ntị, ana m eme ihe n'eziokwu. Nọmba ndị ahụ bụ usoro nkwado maka ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa iji kpee gị ikpe… ọ dịghị ihe ọzọ.
Na naanị n'ihi na mmadụ wepụrụ aha ya apụtaghị na akara gị mere ihe ezighị ezi. E nwere ọtụtụ puku ihe kpatara mmadụ ga - eji wepu ma ọ bụ wepu aha na ntanetị gị ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ gị. Ikekwe ha hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ, ikekwe e buliri ha n'ọkwa, ikekwe ibu ọrụ ha gbanwere, ikekwe ha chere na ụdị gị bụ ihe dị iche.
Nzụlite abụghị ihe na-atụ anya ka onye ọ bụla na-eso ụzọ ma ọ bụ onye debanyere aha ịzụta. Nurturing bụkwa oge ebe atụmanya nwere ike nweta nghọta n’ime akara gị ma kpebie ma ị dabara adaba. Ya mere… ụfọdụ na-ahapụ.
Ọ pụtara na enweghi ihe ị na-eme iji chụpụ ha? Ọ bụghị n'ezie. Naanị m zara otu onye ọrụ ibe m n'izu a wee gwa ya na ọ na-azọ ije nke ọma na ụda na spamminess nke ozi ịntanetị m. Achọrọ m ka ọ mata na ọ na-agbasi ike ma laa azụ, ma ọ bụghị ya nwere ike tufu m. Ọzọkwa, abughi m onye ahịa ya kachasị mma ka ọ ghara ige m ntị!
Nnyocha ahụ chọpụtara na 21% agbasaghị n'ihi ọdịnaya na-agwụ ike, n'ihi okefe nke posts na Facebook ma ọ bụ faili ntanetị. Ihe pere mpe nwere ike ịbụ nke ọzọ do Ya mere tụlee ugboro ole kachasị gị site n'iji ya atụnyere ndị ọzọ na ngalaba gị ma ọ bụ gbaa ule ebe ị belata oge.
Ekwuola m ya ọtụtụ puku ugboro, ihe mere ndị mmadụ ji ege gị ntị bụ na ị na-enye ha uru. Nọgide na-enye uru na ị ga-ejigide ndị na-eso ụzọ na ndị debanyere aha dị mkpa. Ka oge na-aga, ị ga-ewulite ntụkwasị obi na njikọ aka ga-esochi. Mana kwusi igba onwe gi mgbe ndi folks ole mapuru leave o ga adi mma. Gaa chọta ndị ka mma!
Gwa na Buzzstream nyochara ndị ọrụ mgbasa ozi ọha na eze 900 iji chọpụta azịza ndị a na ihe kpatara ndị na-eso ụzọ efufu.
Tags: na-eto eto na-ege ntịndepụta ndenye aha na-eto etoihe kpatara ndi mmadu ji adighiihe mere ndị mmadụ ji wepu aha hauru